U-Ini Edo uqalisa ukuXhobisa ngenkqubo-Iindaba zaseNigeria kunye neStror yeHlabathi
INgu-Edo uqala inkqubo yokuxhotyiswa kwabasetyhini, INkundla ePhakamileyo yase-US ithi amazwe angabohlwaya abavoti beekholeji zonyulo, isivumelwano seMatic sihlaziyiwe. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. Isithethi seNollywood uIri Edo uqala inkqubo yokuxhotyiswa kwabasetyhini abancinci
Iseti yokuqala yabasetyhini abonyulelwe inkqubo yokuxhotyiswa
Umlingisi weNollywood, Mna Edo Uqalise inkqubo yokuxhotyiswa kwabasetyhini abasebancinci abanezakhono zedijithali e-Afrika. U-Ini Edo uthi le nkqubo yokuxhobisa yenzelwe ukunceda oosomashishini abakhokelayo ekuqhubeleni phambili ukuxhotyiswa kwezoqoqosho kule ndawo yanamhlanje yedijithali.
Ukwazisile oko ngexesha lokushicilela kobuntombi apho wathetha nabantu abaxhamla kwizidumbu zakhe eAkwa Ibom. Uqeqesho luya kuqhubela phambili kwi-intanethi kwaye abathathi-nxaxheba baya kunikwa izatifikethi ekugqibeleni ecaleni kwezixhobo zokubanceda ukuqala umsebenzi wentengiso yedijithali.
U-Ini Edo, obesandula kuqeshwa njengoMncedisi oKhethekileyo kuPhuhliso lwezoKhenketho yi-Akwa Ibom State Governor, Governor U-Emmanuel lisendleleni yokufikelela ikhulu lamabhinqa aselula kwiAfrika iphela.
2. UMahama ukhetha u-Prof Naana Opoku-Agyemang njengeqabane eliqhubayo eGhana
UNjingalwazi uJane Naana Opoku-Agyemang
Umgcini wefulegi ye-National Democratic Congress (NDC), owayesakuba nguMongameli NguJohn Dramani Mahama, ukhethe uNjingalwazi UJane Naana Opoku-Agyemang Njengomlingane wakhe ophethe unyulo luka-2020.
IGosa lezoNxibelelwano leSizwe le-NDC, Mnu USammy Gyamfi ibhengeze ukuba uProf Opoku-Agyeman ukhethwe ukuba abe liqabane kwitikiti le-NDC emva kwentlanganiso phakathi kweflegi kunye neKomiti eLawulayo yeSizwe (NEC) kwikomkhulu lakwaNDC ngoMvulo we-6 kaJulayi ngo-2020 e-Accra.
Uxelele oonondaba ukuba uNjingalwazi Opoku-Agyeman wafumana isivumelano esingavumiyo kwi-NEC nakwiBhunga laBadala leqela.
3. Izikhululo ze-SAPS ziyaqhubeka nokubethwa sisifo se-COVID-19 eMzantsi Afrika
Izikhululo zamapolisa ezingaphezulu kwilizwe liphela zivaliwe okwethutyana ngoMvulo we-6 kaJulayi njengelinye okanye ngaphezulu amalungu eSouth African Police Service (SAPS) aqhotyoshelwe kuvavanyo lwe-COVID-19. I-SAPS ibhengeze ukuba ezinye izikhululo ezili-12 bezivaliwe ngoMvulo.
Kwiiveki zakutshanje, izikhululo zamapolisa ziye zanyanzelwa ukuba zivalwe ngenqanaba elonyukayo, kusetyenziswa imigaqo-nkqubo yokuphelisa umthetho kunye noogxa babo kuvavanywa. Ukukhangelwa indawo zonxibelelwano kuyaqhubeka uninzi lwezikhululo ezichaphazelekayo kumjikelo wakutsha nje wokuvalwa.
4. INkundla ePhakamileyo ithi amazwe angabohlwaya abavoti beekholeji zoNyulo
Inkundla ePhakamileyo ngoMvulo yathi amazwe angabohlwaya amalungu eKholeji yoNyulo aphule isithembiso sokuvotela umntu owayephumelele ukuvota kulonyulo. Ityala liza njengokuba ixesha lonyulo lishushu kwaye neKholeji yoNyulo iya kuphinda ibe ngaphambili nendawo yezopolitiko ezandayo kunye nezobupolitika.
Ngo-2016, abali-10 kwabonyulwa kamongameli abangama-538, bezama ukuvotela omnye umntu ongengomgqatswa wabo. Lilonke, ilizwe lama-32 kunye neSithili seColumbia inemithetho eyenzelwe ukudimaza abanyuli abangenalukholo. Kodwa kude kube ngu-2016, akukho rhulumente wayekhe wamohlwaya okanye wamsusa unyulo ngenxa yevoti yakhe.
5. UNeanja Matic: Abadlali baseManchester United basayina isivumelwano esitsha de kube ngu-2023
UMatic (ngasekhohlo) wajoyina iManchester United esuka eChelsea ngo-2017
Umdlali ophakathi waseManchester United Nemanja Matic uyandisile isivumelwano sakhe neklabhu de kube nge-2023 kaJuni. I-Serbia yamazwe aphesheya, i-31, yajoyina i-United yaseChelsea ngo-2017 kwaye yayiza kuba iyaphuma ngoJuni ngo-2021.
"Njengomdlali, kusekho okuninzi endinokukunika kunye nokufezekisa umsebenzi wam kwaye ukwenza oko neManchester United kuya kuba luzuko olukhulu," Utshilo uMatic. "Eli liqela elichulumancisayo ngokwenene ukuba yinxalenye yalo, sinolungelelwaniso lobutsha kunye namava ngaphakathi kweqela."
Beyoncé kunye Ini Ini Edo Vuma, uthixokazi Ibhokisi yeeBhanti zikaThixo Zonke Ezi ziRave ngoku